Dabeecadda Qofka Leh Dhiiga AB | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxyaalaha aan ka hadlayno ma ahan in 100% sax yihiin balse waa cilmibaaris la sameeyay, laguna sameeyay dad badan oo caalamka ku nool. Waana mid shakhsi walba ufuran in uu ku sameeyo baaritaan. Waxaan soo qaadanaynaa astaamaha lagu garto qofka leh dhiigga AB, wuxuu ku wanaagsanyahay, waxyaalaha uu ku xunyahay, cunada nooca ku haboon, xanuunada uu unugul yahay, qaabka uu useexdo IWM.
Muxuu ku fiicanyahay ruuxa leh dhiigga AB
Waa dad hal-abuur leh.
Waa dad isbeddel badan.
waa dad ku fiican diblomaasiyadda.
Waa dad jecel in ay ahaadaan xoriyad, waxkastana loo madaxbaneeyo.
Waa dad saaxiibtinimada ku wacan.
Waa dad taxadar badan.
Markii ay la macaamilayaan dadka, waa kuwo aad uga fiirsada heshiiskooda, IWM.
Waa dad wixii loo dhiibo aad u ilaasha.
Waa dad run badan.
Waa dad farxaaniyiin ah oo qosol badan.
Dabeecadaha aan wanaagsanayn ee ay leeyihiin AB
Waa dad aan la saadaali Karin daacadnimadooda, maadaama ay yihiin dad isbeddel badan.
Waa dad xanaaqooda aan la dareemin.
Waa dad wax walba unugul sida xanuunka, jacaylka, welwelka, IWM.
Waa dad aan waxba cafin, mar walba waxay hadal hayaan wixii mar hore dhacay.
Waa dad aan dhakhso jawaab laga helin.
Waxaa inta badan ka soo baxa dadka labo wajiilaha ah.
Shaqada ku haboon dadka AB-da ah:
Waxay ku fiicanyihiin hoggaaminta.
Xanuunada ay unugulyihiin AB
Waxay unugulyihiin kansarka ku dhaca beeryaraha ama ganaca.
Waxaa ku dhaca xanuunada uurku jirta.
Tags: Dabeecadda qofka leh dhiiga AB
Next post Haweenka iyo Guriga
Previous post Dabeecadda Qofka Leh Dhiiga O